Agwụcha elu na a bricked ekwentị abụghị ihe onye ọ bụla chọrọ. N'ụzọ dị mwute, nlezianya usoro atụmatụ nke Apple e mere na-usoro alterations ke n'ọnụ mmiri na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla mechara mgbanwe dị ka ndị dị otú ahụ ka gị na iPhone, ị bụ yikarịrị na-echere nsogbu.
A ole na ole n'ime ihe ndị mere ị pụrụ imesị bricking gị iPhone dị ka na-esonụ.
• Hardware ọdịda
• ole dị ka ike ọdịda n'etiti-egbu maramara na ma ọ bụ na ebe nchekwa
• Iweghachi iji a rụrụ arụ ndabere
• ezighị update (dị ka mgbe emelite ka iOS9)
• etre update usoro ruru ka ike ọdịda
Part 1: Olee idozi bricked iPhone / iPad mere site iOS 9 update
Nkebi nke 2: Olee otú iji zere a bricked iPhone / iPad mgbe upgrading ka iOS 9
Nwetara gị iPhone bricked? Ọfọn, na-echegbu onwe bụghị dị ka anyị nwere ihe ngwọta kasị mma n'ụwa n'ihi na nsogbu a gị na ọ bụ nnọọ ihe dị mfe otu na-esi gị aka na-eji dị ka mma. Aha nke a magburu onwe ngwọta na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake).
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị site na iji njikọ dị ka e n'elu.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo echichi zuru ezu, ẹkedori Wondershare Dr.Fone ma họrọ nhọrọ nke 'Idozi iOS nkịtị' site isi window. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri USB. Na sekọnd ole na ole nke ejikọta gị iPhone na kọmputa, Dr.Fone kwesịrị ịchọpụta ngwaọrụ na-egosipụta ya na ya na ihuenyo. Ugbu a, pịa bọtịnụ 'Malite'.
Nzọụkwụ 3: Mgbe ahụ, iji idozi gbajiri agbaji iOS na gị iPhone, ị ga-ibudata ọhụrụ femụwe. Dr.Fone-Eme ka ọ ibu mfe n'ihi na ị dị ka ọ ga na-akpaghị aka chọta kacha adabara femụwe maka ngwaọrụ gị na ka ị na-ahọrọ ọ na-esote na ihuenyo. Nanị pịa na bọtịnụ 'Download' na Dr.Fone ga-eme ndị ọzọ maka gị.
Nzọụkwụ 4: Dr.Fone kwesịrị ugbu a na-egosipụta ọganihu nke download usoro dị ka e gosiri na foto n'okpuru. Ka software mezue a nzọụkwụ n'ụzọ zuru ezu. Hụ na gị na iPhone-anọ na njikọ na kọmputa gị niile a mgbe.
Nzọụkwụ 5: Nọdụ azụ na-enweta dị ka otu ugboro Dr.Fone risịrị nbudata ọhụrụ femụwe n'ihi na gị iPhone, ọ ga-anọgide na idozi iOS na na-na na-egosipụta ọnọdụ dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 6: Ozugbo iOS e ofu na gị iPhone, Dr.Fone ga gosi na gị dị ka e gosiri oyiyi n'okpuru nakwa gaba Malitegharịa ekwentị gị iPhone na ya.
Ọ bụ ya! Ọ bụ na mfe idozi a bricked iPhone iji Wondershare Dr.Fone. Anyị nwere olileanya na gị iPhone mgbe Nwela bricked ke akpa ebe Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ọ na-eme maka ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe mere rhyme, ị maara ugbu a ihe na-eme.
Bricking, n'ihi na ndị na-ka ejighị n'aka na, pụtara na gị iPhone agbanwewo n'ime ihe dị oké ọnụ brik, na n'agbanyeghị nke ịbụ a elu klas, ọkaibe kọmputa ngwaọrụ, ọ bụ ugbu a nanị dị ka ihe ọma dị ka a brik. Ọ na-mwute-ekwu ihe a, nụrụ nke a na maa aga site na nke a dị ka a ọnọdụ Otú ọ dị a otutu anyị chere ihu ihe ịma aka a mgbe na-eme ruo gradations ọhụrụ iOS.
Ya mere, anyị chere na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere ike na-agwa gị ihe na-eme ma ọ bụ kama na-uche mgbe upgrading ka iOS 9, nke mere na ị pụrụ izere bricking gị iPhone na N'aka-aga site na mgbu dị ka a kọwara n'ihu.
1. Jide n'aka na ị ikwunye-na gị iPhone na a pụrụ ịdabere na ike ọkọnọ tupu ị malite na femụwe melite iji iOS 9.
2. Hụ na ị na-jikọọ a ike na otu ebe WiFi Njikọ Ọ bụrụ na ị họrọla kwalite ka iOS 9 n'elu ikuku.
3. Mee ya ka ọ a na-ezo aka nwere ezu nke ohere nchekwa tupu amalite na femụwe kwalite ka iOS 9. The iOS 9 femụwe update-atụ anya ga nke size nke gburugburu 2-3 GB.
4. Aka gị iPhone nnọọ nlezianya dị ka ọtụtụ nke ugboro ngwaike mmebi nwekwara na-eduga ná bricking nke iPhone, karịsịa mgbe upgrading ka a ọhụrụ iOS.
5. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ; hụ na ị na-eji ụlọ ọrụ nyere USB USB ma ọ bụrụ upgrading ka iOS 9 site na kọmputa, dị ka Njikọta mbipụta n'etiti na kọmputa na gị iPhone n'oge femụwe nweta nkwalite bụ otu nke na-eduga na-akpata bricking.
> Resource> iPhone> iPhone atụgharịa brik Mgbe iOS 9 nkwalite, Olee idozi ya?